Wararkii ugu dambeeyay rasaas lagu furay colonyo uu lasocday madaxweynihii hore Xassan Shiikh Maxamuud. | Weheliye Online
Wararkii ugu dambeeyay rasaas lagu furay colonyo uu lasocday madaxweynihii hore Xassan Shiikh Maxamuud.
Muqdisho(Weheliye Online) Saraakiisha mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay rasaaseeyeen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud,ahna Musharax u taagan qabashada xilka Madaxweyne.
Dhawaan ayeey aheed markii sarkaal sare oo ka tirsan mucaaradka lagu rasaaseeyay inta u dhaxeeysa tarabuunka iyo warshada caanaha ee gobolka banadir.
Mucaaradka ayaa muujinaya feejignaan dheer kadib markii la bartilmaameed saday colonyo uu la socday madaxweynii xasan sh maxamuud.
Previous articleDEG DEG: Go’aanka cusub Midowga Musharaxiinta ee Doorashada & Dagaalka siyaasadeed ee socda
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo safar ku tegay magaalada Jowhar oo muddo bil ay go’odoomiyeen Fataahaado iyo Al-Shabaab.